I-iWatermark yasimahla ye-iPhone / i-iPad 3.1 Ikhutshwe-Ekuphela kwesixhobo sokuSkena utyikityo lwakho kwaye ulisebenzise kwi-Watermark Photos | Plum emangalisayo
kwama Press, Akohlulwanga
IWatermark yasimahla ye-iPhone / i-iPad 3.1 ekhutshiweyo-Ukuphela kwesicelo sokuSayina ukuTyikitya kwakho kwaye uyisebenzise kwiifoto zeWatermark
UMHLA: ngoJuni 17, 2011
Isixhobo seWermarking ESIMAHLA sooFundo, ooSomashishini kunye nooBntu. Ngokukhuselekileyo, khusela, kwaye ukhusele imifanekiso / ubugcisa bakho ngombhalo obonakalayo okanye umzobo okanye i-QR watermark okanye utyikityo lwakho. Nje ukuba ifakwe kwifoto le watermark ebonakalayo ibonisa indalo kunye nobunini bakho. Ukujonga ukubonwa nokubaluleka kokuhambahamba kubaluleke ngakumbi njengokutyikitya igama lakho kwifoto ukubonisa ngokucacileyo, nokuba yeyiphi ifoto yakho, yeyakho. Ukujonga amanzi kunokusetyenziselwa ukongeza umyalezo wakho okanye iigraphics ezimnandi kuso nasiphi na ifoto.
Le nguqulo yongeza ukuskena kokusayina. I-iWatermark ithatha ifoto yotyikityo lwakho, yongeza ukubonakala kwe-alpha kwangoko kwityala lakho ledijithali ukuze isetyenziswe nangaliphi na ixesha ukubheka iifoto zakho kunye namanye amaxwebhu. Esi sakhono sokuskena sisibonakaliso sokuqala kwaye sikhethekile kwi-iWatermark.
iWatermark yasimahla ye-iPhone / i-iPad. Ikhonkco lokufunda ngakumbi lilapha:
- ngoku ineefonti ezingama-67 zokukhetha kuzo ukongeza kuzo zonke iifonti ze-iOS eziqhelekileyo.
- iifonti ngoku zibonisiwe kubuso boqobo befonti.
-Ngenisa utyikityo lwakho okanye umzobo ozotywe usebenzisa ikhamera ye-iPhone okanye ye-iPad. Sayina iphepha elimhlophe nge-inki emnyama usebenzisa ipeni elungileyo kunye nokukhanya okuhle, khetha Yenza i-Watermark yeMizobo emva koko usayine iSiginitsha.
I-iWatermark MAHHALA ye-iPhone / i-iPad yinkqubo yenqanaba lobuchule bokujonga iifoto ze-iPhone kunye neminye imifanekiso. Yeyona ndlela ilungileyo yokutyikitya umsebenzi wakho wobugcisa kwaye uyamkelwe njengepropathi yakho yokuqonda. iWatermark ye-iPhone ilula kwaye isebenza kwi-iPad nayo. Kukho iinguqulelo zeWatermark zeMac kunye neeWindows.
Ukukhuphela i-iWatermark MAHHALA kwivenkile ye-iTunes yiza apha: